3D ပစ္စည်းစိတ်ဝိညာဉ်၌ပုံနှိပ်သလဲ? အပူဆုံး 3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများကိုသိရန်သင့်အားကိုယူ - တရုတ် Cixi Lanbo ပုံနှိပ်
3D ပစ္စည်းစိတ်ဝိညာဉ်၌ပုံနှိပ်သလဲ? အပူဆုံး 3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများကိုသိရန်သင့်အားကိုယူ
လူအတော်များများ 3D နေဖြင့်ပုံနှိပ်လှပသေးငယ်တဲ့အရာဝတ္ထုအားဖြင့်ဆွဲဆောင်, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး 3D ပုံနှိပ်အာရုံစိုက်။ ထို့ပြင်အချို့မိတ်ဆွေများကို 3D ပရင်တာ၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ဂရုစိုက်မည်, နှင့် 3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများအများဆုံးကိစ္စများတွင်လျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့, 3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများ 3D ပုံနှိပ်နည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောပစ္စည်းအခြေခံဖြစ်ဟုဆိုသည်နိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြီးအကျယ် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သုံးနိုင်တယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ 3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများအဓိကအားပေါ်လီမာပစ္စည်းများ, သတ္တုပစ္စည်းများ, အမှုန့်ပစ္စည်းများ, ကြွေထည်ပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
polymer ပစ္စည်းများအဓိကအားဖြင့်အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်, ဇီဝပလတ်စတစ်, thermosetting ပလတ်စတစ်, photosensitive resins, etc တို့ပါဝင်သည်နှင့်ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။
အင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ်စက်မှုဇုန်အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်ပြင်ထည်ပစ္စည်းများအဖြစ်အသုံးပြုစက်မှုဇုန်ပလပ်စတစ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခွန်အားကိုသက်ရောက်မှုခုခံ, အပူခုခံ, ခိုင်မာသောနှင့်အိုမင်းခုခံအတူပလပ်စတစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ applications များ၏ကျယ်ပြန့အတူ 3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်၏ bioplastics ဒါဟာအဓိကအားစသည်တို့ကို PLA, PETG, PHB ရှိပြီး, ကောင်းသောဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးရှိပါတယ်; ဗဓေလသစ် thermosetting မြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိနှငျ့မီးခုခံရှိပြီး, အမှုန့်လေဆာ sintering 3D ပုံနှိပ်သုံးပြီးဖြစ်စဉ်ကိုဖွဲ့စည်းများအတွက်အလွန်သင့်လျော်၏, photosensitive ဗဓေလသစ်ပိုမြန်တင်နိုင်အမြန်နှုန်း, စားပွဲပေါ်မှာ Excellent ကခြောက်သွေ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, တန်ဆာပြီးနောက်ချောမွေ့အသွင်အပြင်ရှိပြီးအများအပြားက high-တိကျစွာထုတ်ကုန်ပုံနှိပ်ခြင်း၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
လက်ရှိ 3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများအများဆုံးပလတ်စတစ်တွေဟာသော်လည်း, ကောင်းသောစက်မှုခွန်အားနှင့်သတ္တု၏လျှပ်စစ်စီးကူးသတ္တုတ္ထု၏ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်သုတေသီများသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစေပြီ။ အဓိကသတ္တုပစ္စည်းများသံမဏိနှင့်သတ္တုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတိုက်တေနီယမ်, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းများနှင့်ဂယ်လီယမ်အဖြစ် Non-ferrous သတ္တုအပါအဝင် ferrous သတ္တုများပါဝင်သည်။
ဒါဟာပလပ်စတစ်ပစ္စည်းမဟုတ်သလိုသတ္တုပစ္စည်းမဟုတ်, သို့သော် 3D ပုံနှိပ်နည်းပညာရန်၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလိုက်အထိုက်နေတတ်အတူအမှုန့်ပစ္စည်းများနေဆဲ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းမြင့်မားတဲ့အမှုန့်ကုန်ကြမ်းလိုအပ်တယ်, နှင့်တန်ဆာအမှုန့်ကောင်းသောပစ္စည်း formability မြင့်မားတန်ဆာခွန်အားကိုသေးငယ်တဲ့အမှုန့်အမှုန်အရွယ်အစား, agglomeration အတွက်အခက်အခဲ, ကောင်းသောလှိမ့အိမ်ခြံမြေ, သင့်လျော်သောသိပ်သည်းဆနှင့် porosity, နှင့်အစာရှောင်ခြင်းအခြောက်ခံခြင်းနှင့်တင်းမာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ Ltd. , မေးနည်းပညာကုမ္ပဏီကတီထွင်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုတ်လုပ်ဖျန်းသဲအမျိုးအစား 3D ပရင်တာအမှုန့်ကုန်ကြမ်းအတွက်လင်းကျောက်သဲအသုံးပြုသည်။
aluminosilicate ကြွေအမှုန့်ကို 3D များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြွေထုတ်ကုန်ပုံနှိပ်။ အဆိုပါ 3D မဟုတ်သောအဆိပ်သင့်, ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်း, ကြွေထည်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်, (ကို C ° 600 အထိ) အပူရေ impervious ဖြစ်ပါတယ်ပုံနှိပ်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုမြင့်မားသည်မဟုတ်, ၎င်းသည်စံပြမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း, tableware (ခွက်, ဖလား, ပန်းကန်, ကြက်ဥအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ခွက်နှင့် Coaster)) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောမီးခွက်, အုပ်ကြွပ်, ပန်းအိုးများနှင့်အနုပညာလက်ရာအဖြစ်နေအိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ။
ခြော, 3D ပုံနှိပ်ခြင်း၏အခြေခံအဖြစ်, 3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများအနာဂတ် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အအရေးပါတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ ပို. ပို. ပစ္စည်းများ 3D ပုံနှိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်တီထွင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများအပြင်, 3D ပုံနှိပ်ခြင်း၏အဓိကနည်းပညာနှင့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုကျွမ်းကျင်ကိုလည်းပြည်တွင်း 3D ပုံနှိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအောင်မြင်မှုများဖြစ်ပါတယ်။ မေးနေဖြင့်ဖြန့်ချိမုန်တိုင်းစီးရီး 3D ပရင်တာတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပထမဦးဆုံး inkjet printhead ဖြစ်ပါတယ်။ (3D ပုံနှိပ် core ကိုအစိတ်အပိုင်းများ) မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်, ငါတရုတ်ပိုမိုကုမ္ပဏီများမှ 3D ပုံနှိပ် core ကိုနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးဆဲမယ့်အစားနိုင်ငံခြားနည်းပညာအပေါ်လုံးဝမှီခိုအတွက်ပိုပြီးစွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မမျှော်လင့်ပါတယ်။